I-APICMO ngumthengisi we-Pharmaceutical Custom synthesis kunye ne-R & D yesivumelwano.
I-APICMO yinkampani yezobisi ejolise kwizixhobo eziphambili zophando olutsha nophuhliso lwe-oncology, ukubonelela ukuphuhliswa kwenkqubo, ukulungiswa kwemveliso, ukuveliswa kwemimandla kunye nezinye iinkonzo zophando lweziyobisi kunye namaziko okuphuhlisa kunye neenkampani zonyango; I-APICMO kwiikhemikhali, iziphumo eziphambili zezolimo, ama-API kunye neefayili Ukuphuhliswa kweekhemikhali, ukulawulwa kwekhwalithi, ukuvelisa i-cGMP, ukuphathwa kweprojekthi kunye nokuthengiswa kunenzuzo kakhulu.
I-APICMO ineqela elinamandla le-R & D kunye nososayensi abanolwazi-uDkt. Zeng zhaosen. Sinesityalo esikhulu sokwenza imveliso kunye neqela lolawulo lophuhliso loshishino. Amalungu olawulo lweqela le-APICMO amaninzi avela kumazwe athuthukileyo afana ne-United States, iYurophu kunye neJapan. Ngaphezulu kwe-10 iminyaka yamava emashishini kwiinkampani zamayeza ngamazwe ngamazwe. Emva kweminyaka engaphezu kweyishumi yokuqokelela kweemarike, i-APICMO inesiseko esibanzi sentsebenziswano kwi-industry intermediates industry.
I-APICMO ibandakanya ukubaluleka kakhulu kwaye ikhusela isakhiwo sengqondo sabathengi bayo. Ukongeza kwi-APICMO yinkqubo ekhuselekileyo yokukhusela ipropati, i-APICMO imisele irekhodi elihle ekulandeleni ukulindelwa kwabaxhasi belizwe. I-APICMO isiseko seeklayenti zabathengi kwiinkampani ezincinci ze-biopharmaceutical ukuya kumazwe ngamazwe ngamayeza, ukusuka kwiinkalo zophando lwezilwanyana nakwiziko lophuhliso, kwii-laboratories kumaziko ophando, kumazwe athile aphuhlisiwe kumazwe asakhulayo njengeChina ne-Indiya. Iiprojekthi ze-APICMO kunye noluhlu lwemveliso luye lwavavanywa kwi-kliniki yangaphambili ukuya kwizicelo zorhwebo.
"I-APICMO yi-ISO 9001: I-2008 eqinisekisiweyo kwaye yonke imisebenzi yezoshishino iyathotyelwa ngokungqongqo kwimigangatho yolawulo lwamazwe ngamazwe."
I-R & D UKWENZA
ukubonelela ukuphuhliswa kwenkqubo, ukulungiswa kwempahla, ukuveliswa kwempahla kunye nezinye iinkonzo zophando lweziyobisi kunye namaziko okuphuhlisa kunye neenkampani zonyango.
Amalungu olawulo lweqela le-APICMO amaninzi avela kumazwe athuthukileyo afana ne-United States, iYurophu kunye neJapan.
I-APICMO inika nokuqinisekiswa kwenkqubo, izifundo eziphezulu, iimvavanyo ezingcolileyo kunye nezifundo zokuzinza ukuhlangabezana neemfuno ze-IND kunye ne-NDA.
I-APICMO ifuna ukuphucula iinkqubo nokunciphisa iindleko zabaxhasi bethu. Siye saqulunqa intsebenziswano enokuthenjwa kwaye inokwethenjelwa yabakhiqizi baseTshayina e-China ukubonelela ngeenkonzo ezichanekileyo kunye nezindleko zokuthenga nokuthengwa kwempahla.
Isenzo somzimba womzimba
I-APICMO yi-API yokufumana i-Award, i-CMO Inkampani.
IIMISEBENZI NGAMABHARATORI AMANQAKU
Ukuhlolwa kwenkqubo kunye nokuchasene nomsebenzi wephepha le-steroidal sulfuric acid i-sodium kunye ne-oxime ihlanganiswe nomsebenzi ochasayo.
OKUBHALA LABORATORY YONYAKA
Iilebhu ezihlangeneyo ze-5 ezinee-yunivesithi ezidumileyo ze-5 eChina. IYunivesithi yaseSichuan, iYunivesithi yaseYain, iYunivesithi yaseTshintszhou, iYunivesithi yaseSunan yeSayensi kunye neThekhnoloji, isiKhungo seKhemistry, iChina Academy yeSayensi (ICCAS)
Isilinganiselo sokunikezela: ukusuka kwiikhilogram ukuya kumawaka eeklogram .we ineqela elincinci lamalungu e-10 olawula uphando jikelele lweemarike kwiindidi zemveliso ezahlukahlukeneyo kunye nophando kubathengisi baseTshayina, iinkcukacha zemveliso, njl njll.
I-APICMO igcwele abantu abanezakhono eziqhutywe ngabasebenzi
ngubani onyamekele ngakumbi malunga nokwenza oko.